Ucoca i-air conditioner ukuphepha amavumba amabi | Bezzia
Coca i-air conditioner ukuze uphephe amavumba amabi
Ngaba uyilayishile i imeko yomoya? Asithandabuzi ukuba ngenxa yobushushu esiye sajamelana nabo kule veki iphelileyo, uninzi lwenu luza kube luqalile. Kwaye mhlawumbi, emva kokungaqeshwa iinyanga ezininzi, uye waqaphela iphunga elithile elingathandekiyo. Ungaxhalabi, coca i-air conditioner kwaye ingxaki iza kuphela.
Ukucoca i-air conditioner ngaphambi kokuyiqala kwakhona entwasahlobo akuncedi kuphela kuphephe ukunuka kakubi enokuvelisa ubumdaka nakweyiphi na indawo yayo. Kodwa, ukongeza, iya kuphucula ukusebenza kakuhle kwamandla. Fumana onke amaqhinga okucoca nathi.
ubumdaka obuqokelelweyo kwizihluzi, abatshintshiselwano, iifeni okanye iidreyini kunokubangela ivumba elibi ukuba iveliswe xa isixhobo sivuliwe. Ukucoca sisitshixo sokuphelisa oku kunye nokwenza umoya ogxothiweyo ucoceke kwaye ungabi nabhaktheriya. Cima isixhobo, landela inyathelo elilandelayo ngenyathelo kwaye uya kuba nalo lihle njengelitsha ngaphantsi kwemizuzu engama-30.
1 Inyathelo ngenyathelo lokucoca
1.1 coca izihluzi
1.2 coca umsele
1.3 Coca umphandle weyunithi
2 Uyicoca nini?
Inyathelo ngenyathelo lokucoca
Umsebenzi wale nto kukucoca umoya kunye nokuthintela iibhaktheriya kunye nezinye ii-microorganisms ekwandeni kunye nokonakalisa ukusebenza kwezixhobo. Isihluzo esimdaka sinciphisa ukusebenza kakuhle kwesixhobo kwaye singunobangela wokuqala wokukhutshwa komoya onuka kakubi.
Iifilitha zifumaneka kwindawo yangaphakathi yokwahlula, emva kwegrille. Ukucoca kuya kufuneka uzisuse. Ukuba ukucoca ukugcinwa, kuya kukwanela ukusebenzisa i-vacuum cleaner ukususa uthuli kunye neempawu ezithile zokungcola. Ukucoca ngokucokisekileyo kwentwasahlobo, nangona kunjalo, ngokufanelekileyo zihlambulule ngamanzi ashushu kwaye zomise emthunzini phambi kokuba uzibuyisele.
Ii-conditioner zomoya zikhupha amanzi ngenxa ye-condensation eqokelela kwi-pan yokukhupha. Xa la manzi ehlala emile - ngenxa yethambeka elibi kumbhobho - anokubangela amavumba amabi kwaye enze lula ukukhula kweebhaktheriya kunye nomngundo.
Ukuvuthela ngamandla ngombhobho kunokuba sisisombululo esilula, nangona kunjalo akuyona into ekhuthazwayo kuzo zonke izixhobo. Ukongeza, kufakelo oluphakathi kudla ngokuba nzima ukufikelela kulo. ukuyijika kwimowudi yobushushu imizuzu embalwa inokuba sesinye isisombululo.
Coca umphandle weyunithi
Nangona iindawo ezibuthathaka kakhulu zikhuselwe ngaphakathi kwiyunithi, kuya kufuneka kwakhona khathalela umphandle wesixhobo ukuze ingaqokeleli uthuli nothuli. Kwaye ungayenza ngokulula okoko nje isixhobo sikwindawo efikelelekayo.
Isicoci sevacuum kunye nelaphu elifumile kancinci liya kunceda ukugcina iyunithi icocekile ngaphandle. I-grille, i-air intake fins kunye ne-casing iya kuba yinto entsha ngaphandle kwesidingo sokusebenzisa nayiphi na imveliso ekhethekileyo yokucoca.
Ngokubanzi, kuyacetyiswa ukuba ucoce i-air conditioner ngaphambi kokuba uyiqalise entwasahlobo kwaye emva kokusetyenziswa ixesha elide ehlotyeni. Kabini ngonyaka rhoqo Uya kuphepha iingxaki ezininzi. Ukongeza, akulimazi ukucoca isixhobo ngaphandle ngakumbi xa sicoca ngokubanzi.
Kuyacaca ukuba xa ucocekile umoya ojikeleza kwikhaya lethu, iingxaki ezimbalwa ziya kuvela. icuba, itshimini yomsi okanye ikhitshi inokwenza imeko ibe mandundu kwaye ifune ukucocwa rhoqo rhoqo nangokunzulu.
Sikunikile izitshixo ukuze ukwazi ukucoca i-air conditioner kwikhaya lakho kodwa hlala ukhumbula ukuyifunda incwadana yemiyalelo yomenzi ngaphambi kokuba uqale ukuphepha iingxaki. Iqela ngalinye lineempawu zalo.
Okokugqibela, ukuba unawo nawaphi na amathandabuzo, sikucebisa ukuba ufowunele ingcali okanye uqhagamshelane nenkonzo yogcino lofakelo. Izahlulo ngoomatshini abacekethekileyo abafuna abasebenzi abaqeqeshiweyo ukuze bakwazi ukusombulula iingxaki ezithile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ikhaya » Coca i-air conditioner ukuze uphephe amavumba amabi
Uninzi lweechungechunge ezihlaziyiweyo zasehlotyeni ezinikezelwa ngamaqonga
I-zucchini kunye ne-mozzarella gratin